घरमा खानेकुरा नभएपछी वि ष से वन… परिवारको बि चल्ली हेर्नुहोस। भिडियो हेर्नुहोस – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /Video/घरमा खानेकुरा नभएपछी वि ष से वन… परिवारको बि चल्ली हेर्नुहोस। भिडियो हेर्नुहोस
घरमा खानेकुरा नभएपछी वि ष से वन… परिवारको बि चल्ली हेर्नुहोस। भिडियो तलको समाचारको अन्त्यमा रहेको छ ।
यो पनि समाचार पढ्नुहोस्
काठमाडौं : नेपाल र भारतका नागरिक लु किछिपी आ वतजावत गर्दा तराईका सीमावर्ती क्षेत्र को रोना भा इरस सं क्रमणको ‘ हट स्पट’ बन्ने जो खिम देखिएको छ। सी मा वर्ती जिल्लाहरू उच्च जो खिममा रहेकाले स्थानीय बासिन्दाले बढी सतर्कता अपनाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। सरकारले को रोना भा इरसबाट स म्भावित सं क्रमित पहिचानका लागि परीक्षणको दायरा विस्तार गरेसँगै सीमावर्ती क्षेत्रमा बढी सं क्रमित भेटिएका छन्। प्रदेश ५ को सीमावर्ती रुपन्देही र बाँके जिल्लामा शुक्रबार दुई जना पुरुषमा सं क्रमण पाइएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले भने, ‘सी मावर्ती क्षेत्रमा सं क्रमणका के स बढी देखिन थालेका छन्। दुई देशबीचको ना का क्षेत्र जो खिमयु क्त छ।’ नेपाल र भारतबीच १ हजार ७ सय ५१ किलोमिटर खुला सीमा छ। भारतमा को रोना सं क्रमण तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। त्यहाँ सं क्रमितको संख्या ३५ हजार नाघेको छ। सं क्रमणबाट मृ त्यु हुनेको संख्या १ हजार १ सय ४७ पुगेको छ। रुपन्देहीमा भेटिएका सं क्रमित भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा मजदुरी गर्दै आएका थिए। सं क्रमित २५ वर्षीय युवा हुन्।
उनी वैशाख ५ गते सी मावर्ती सम्मरीमाई गाउँपालिकाको ठोठरी ना काबाट लुकेर भित्र प्रवेश गरेका थिए। सरकारले को रोना भा इरसको स म्भावित सं क्रमण रो क्न चैत ९ गतेदेखि ल कडाउन गरेपछि उनी ना कामा लुकेर बसेका थिए। नेपालगन्जमा भेटिएका सं क्रमित पनि भारतको रुपैडिहा क्षेत्रबाट आएका व्यक्तिबाट सं क्रमित भएको जनाइएको छ। नेपालगन्जका सं क्रमित ६० वर्षीय व्यक्ति एकलैनी क्षेत्रका भएको जनाइएको छ। उनी भारतको बहराइच क्षेत्रबाट एक महिनाअघि नेपाल आएको पाइएको छ। दुवै सं क्रमितको ना क तथा घाँ टीको ¥ याल (स्वाब ) नमुना परीक्षण गरिएको थियो। पोलिमरेज चेन रियाक्सन (पीसीआर) विधिबाट परीक्षण गर्दा को रोना भा इरस पो जिटिभ देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोशालामा परीक्षण गरेर पुष्टि भएपछि मन्त्रालयले संक्षिप्त विवरणसहित सार्वजनिक गरेको थियो। उनीहरुको ‘ट्राभल हिस्ट्री’सहित ट्रेसिङको कार्य अघि बढाइएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नि यन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले बताए। सं क्रमित दुवै जनाको स्वास्थ्य सामान्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। वरिष्ठ श्वा सप्रश्वास तथा सघन उपचार (आईसीयू) विशेषज्ञ प्राडा अर्जुन कार्कीले ज्व रो नआएको र खोकी लागिरहेको छैन भन्दैमा स्वस्थ मान्न नसकिने बताए। उनले भने,‘ ल क्षण नदेखिएको अवस्थामा पनि को रोना सं क्रमण देखिएको छ। कुनै लक्षण देखिएको छैन भन्दैमा अरुसँग भेटघाट गर्नुहुँदैन।’
ल क्षण नदेखिएका व्यक्तिले पनि को रोना सा र्ने भएकाले पीसीआर विधिबाट परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने डा. कार्कीले सुझाव दिए। ‘ सीमावर्ती क्षेत्र जो खिममा भएकोले स्थानीय बासिन्दा अझ बढी सं वेदनशील र अनुशासित हुनु जरुरी छ’, डा. कार्कीले भने। पर्साको वीरगन्जका एक व्यवसायीलाई पनि को रोना सं क्रमण भएकोमा निको भई डिस्चार्ज भएका छन। पश्चिमी मात्र नभएर पूर्वी र मध्य क्षेत्रका सीमावर्ती क्षेत्रमा पनि जोखिममा रहेको विज्ञको ठम्याइ छ। काठमाडौंलगायत मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा हालसम्म ५९ जना सं क्रमित फेला परेका छन्। जसमध्ये पुरुष ४९ र महिला १० रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सं क्रमितमध्ये १६ जना भने निको भएर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन्। अन्य ४३ सं क्रमितको उपचार विभिन्न अस्पतालमा भइरहेको छ।
घरमा खानेकुरा नभएपछी वि ष से वन… परिवारको बि चल्ली हेर्नुहोस। भिडियो हेर्नुहोस-